what is Utorrent — MYSTERY ZILLION
Eain Chan Myae
March 2011 edited March 2011 in File Request
Utorrent ကနေ download free ဆွဲလို ့ရတယ်လို ့သိရပါတယ် ဘယ်လို့အလုပ်လုပ်လဲသိချင်လို ့ပါ....
torrent ဆော့ဖ်၀ဲလ်လည်း ဒေါင်းပြီးသွားပြီင်္ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
youtube ကနေ ဒေါင်းရင် survey တွေ တစ်အားရှုပ်ပါတယ် ဘယ်လို ဖြတ်ကျော်လို ့ရမလဲသိချင်ပါတယ်
it's torrent download but not work in Myanmar and too slow in Singapore
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ်ခုလောက်ထပ်မေးပါရစေ ကျွန်တော် ဒေါင်းလုပ်တစ်ခုဆွဲပြီးပါပြီ .rar ပါ .txt* ကို passwords လုပ်ထားပါတယ် .rar passwords cracker နဲ ့စမ်းကြည့်တာလည်းမရပါဘူး threr is no passwords to crack ဆိုပြီးပြနေတယ် ဘယ်ဆော့ဖ်၀ဲလ်နဲ့ ရမလဲမသိဘူး
တောရန့်ကိုသုံးပြီးယူကျုကိုဒေါင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ၊သူများတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်၊ဒါပေမယ့်တောရန့်ကနေOSတွေApplication,HD,Blu ray movie ,Games,music albumတွေကိုတော့ဆွဲပြီးသုံးတာအဆင်ပြေပါတယ်၊မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မသိဘူးခင်ဗျ၊မရဘူးလို့တော့ပြောကြတာပဲ၊သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အရမ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့တောရန့်ပါ၊တောရန့်ကိုဒေါင်းချင်ရင်isohunt bittorrentတို့pirate bay ,torrentaday အများကြီးပါပဲတောရန့်ဆိုက်တွေကနေဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်(မှတ်ချက်)Seeder 0Leecher0တွေကိုတော့မဆွဲနဲ့ပေါ့အဲဒါတွေကိုဆွဲရင်ကြာလိမ့်မယ်။S,Lမျာများရှိတဲ့ဟာတွေကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်များလေကောင်းလေပါပဲမဆွဲခင်ကွန်မန့်လေးတွေအရင်ဖတ်ပါ။ကိုယ့်ရှေ့ကသူတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲပေါ့နော်၊ပြီးတော့u torrent accelerator လိုဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေကိုပါသုံးပြီးတောရန့်ကိုဆွဲရတာမြန်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်setting ထဲမှာbandwith allocationကိုhighမှာထားပါနော်၊မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့ဘယ်လိုသုံးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာသိတဲ့သူများရှိရင်လဲပြောကြပါ။vpn ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ရငိပြည်တွင်းမှာလဲရတယ်လို့တော့ကြားဘူးပါတယ်၊ဒါပေမယ့်vpnကိုဘယ်လိုရနိုင်မယ်ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လဲမသိပါဘူး
Eain Chan Myae wrote: »
you tube ကနေDownloadဆွဲဖို့ဆိုရင်တော့MozillaFirefox ရဲ့Add onကနေdownload helperကိုadd onမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပါလွယ်ပါတယ်
Now I can test torrent. It work.
But u need to setting up proxy. I mean not myanmar proxy.
I can download Fully 1MB speed.